GM4MD.org - Our Mission
Formed in the wake of the February coup, GM4MD aims to aid in the restoration of Myanmar Democracy through the following mission, vision, and values.
ဖေဖော်ဝါရီလ အာဏာသိမ်းမှုနောက်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော GM4MD သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဒီမိုကရေစီကို အောက်ပါ မစ်ရှစ်၊ ရူပါရုံ နှင့် တန်ဖိုးများတို့ဖြင့် ပြန်လည်ထူထောင်ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
GM4MD’s mission is to build and strengthen networks for global pro-democracy movements for Myanmar and meet technical needs for informed and targeted youth empowerment activities. We aim to organize the Myanmar diaspora, friends of Myanmar, friends of democracy in general, and existing organizations intoaglobal community that coordinates grassroots action to bring about this future.
GM4MD ရဲ့ မစ်ရှင်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဒီမိုကရေစီရရှိရန် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ ထောက်ခံအားပေးဆောင်ရွက်နေသော ကွန်ရက်များကို ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်နှင့် လက်တွေ့အခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီပြီး သေချာစွာရွေးချယ်သတ်မှတ်ထားသော လူငယ်စွမ်းအားမြှင့်တင်ပေးရန်လှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် လိုအပ်သော နည်းလမ်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များတို့ကို ပြည့်မှီနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ မြန်မာလူမျိုးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သူငယ်ချင်းများ၊ ယေဘုယျအားဖြင့် ဒီမိုကရေစီကိုလိုလားသော သူငယ်ချင်းများ၊ သက်ဆိုင်သည့်ရှိနေပြီးသော အဖွဲ့အစည်းများတို့ကို ပေါင်းစည်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်အတွက် အခြေခံလူထုလှုပ်ရှားမှုကိုဆောင်ရွက်နိုင်သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
Youth in Myanmar have opportunities to follow their own interests and passions in peaceful, thriving communities without violence.
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူငယ်များ ၎င်းတို့၏ စိတ်ဝင်စားမှုများနှင့် စိတ်အားထက်သန်စွာ လေ့လာလိုက်စား လိုသည်များကို အေးချမ်းဝပြောပြီး အကြမ်းဖက်မှုကင်းသော အသိုင်းအဝိုင်းများအတွင်း လေ့လာလိုက်စားနိုင်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။
Equitable and just democracy (ညီမျှပြီး တရားမျှတသော ဒီမိုကရေစီ)
Solidarity with pro-democracy activists in and from all areas of Myanmar (မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားမှ ဒီမိုကရေစီအတွက် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့် ရပ်တည်ခြင်း)
Transparent and inclusive decision-making (ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီး အားလုံးပါဝင်စေသော ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်း)
Professionalism and professional development (ပရိုဖက်ရှင်နယ်ပီသမှုနှင့် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုတွင် တိုးတက်ရေး)
We believe that the people of Myanmar have suffered long enough and deserve nothing less thanademocratic society that:
မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် ဒုက္ခများစွာကို ကြာရှည်စွာ ခံစားခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်ပြီး အောက်ပါတို့ထက်မလျော့နည်းသော ဒီမိုကရေစီအခြေခံ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ရရှိသင့်သည်ဟု ယုံကြည်ပါသည် -
Respects the rights of all persons (လူအားလုံး၏ အခွင့်အရေးကို လေးစားသော);
Rejects all forms of discrimination including but not limited to: race, ethnicity, skin color, religion, sexual orientation, or disability (လူမျိုး၊ အသားအရောင်၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိမ်းညွတ်မှု၊ မသန်စွမ်းမှု စသည်တို့အပေါ်တွင် ခွဲခြားမှုအပါအဝင် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအားလုံးကို ဆန့်ကျင်သော); and
Rejects any form of militarization of the government (အစိုးရတွင် စစ်တပ်၏ ပါဝင်ခြင်းအားလုံးကို ဆန့်ကျင်သော).
We believe that no person is too small, no deed insignificant to affect change.
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ရာတွင် မည်သူက တတ်နိုင်စွမ်းအားဖြင့် သေးငယ်လွန်းသည်၊ မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုက ထိရောက်မှုနည်းလွန်းသည်ဟူ၍ မရှိ ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
We plan to achieve these aims through:
အောက်ပါတို့အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်နေပါသည်-
သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ဦးဆောင်သူများကိုအကြံပေး စည်းရုံးခြင်း
Empowering and connecting existing organizations and grassroots organizers to spearhad political advocacy efforts
သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
Coordinating international action for Myanmar by fostering new relationships with potential partner organizations and maintaining such partnerships.
Maintainingastrong social media presence for GM4MD on all social media platforms--Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, and potentially more...
အခြေအနေများကို မျက်ခြေ မပြတ်စေရန် ရေးသားတင်ပြခြင်း
Keeping the story alive in mainstream media by writing blogs to raise awareness and keeping track of news to highlight in GM4MD's Weekly Positive News series
ဆန္ဓပြပွဲများ ကို စီစဉ်ခြင်း
Magnifying and coordinating global protest campaigns
လိုအပ်သည့်နေရာများအတွက် ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေခြင်း
Bridging efforts to support the movement and those affected by the military
စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် အကူအညီပေးခြင်း
Providing and coordinating mental health and elderly support
အချက်အလက်များ၏ စွမ်းအားဖြင့် ဒီမိုကရေစီကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ခြင်း
Coordinating big data efforts to benefit Myanmar's nascent democracy